Kubvira payakavambwa muna 1995, Sino-ocean Matine yakagara yakazvipira kupa zvakarongeka uye zvine hunyanzvi basa rekumira kune indasitiri yegungwa. Mushure memakore makumi maviri nemashanu ekuvandudza, izvozvi zvave kuita bhizinesi rakazara iro rinounganidza zvikamu zvekuparadzira, kugadziridza uye kugadzirisa, kugadzirisa chikepe, rutsigiro rwehunyanzvi uye zvigadzirwa zvekuvaka zvikepe pamwechete. iyo kambani yanga ichichengetedza hukama hwekudyidzana hwepedyo nemakuru enjini ekugadzira uye mafekitori epasi rese. Iyo kambani inozivikanwa neyakavimbika kutenga sosi, yakagadzika mhando yepamusoro uye mutengo unonzwisisika.
Isu tinopa dzakasiyana siyana dzepakutanga (OEM) uye marezenisi ekuparadzanisa zvikamu uye magungano emhepo zhinji yemumvura uye mafiriji macompresser emhando dzakasiyana, pamwe neakakwana compressor zvikamu.
Compressor zvikamu zvinounzwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi uye mune akasiyana magadzirirwo, ese matsva uye akagadziriswazve. Dzese dzinoedzwa uye dzine gwaro rekushanda rinokwana mwedzi mitanhatu.
Tinogona kupa kune main air compressor Cylinder, seinotevera:
Inokodzera JP SAUER & SOHN - WP akateedzana.
Inokodzera SPERRE - HV uye HL akateedzana.
Inokodzera TANABE - yemhando dzese zvizere.
Inokodzera HATLAPA - L uye W akateedzana.
Inokodzera HAMWORTHY - SF, TF, TM uye V akateedzana.
Inokodzera YANMAR - yemhando dzese zvizere.
Pashure: Pisitoni & pisitoni mhete
Zvadaro: Yakakwira kumanikidza kubvisa & Exhaust vharafu